Shaqaale ka tirsan Waaxda Dabdamiska Gobolka Banadir oo tababar loogu soo Xiray Nairobi “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir oo kaashaneya UNSOA iyo Kenyan Airport Authority ayaa qaar ka mid ah shaqaalaha Waaxda dabdamiska tababar kor loogu qaadayay xirfadooda ugu soo xiray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, iyadoo munaasabada ay ka qeyb galeen xubno ka tirsan maamulka gobolka, safiirka Soomaaliya ee Kenya iyo mas’uuliyiin kale.
Shaqaalaha tababarka loo soo xiray oo tiradoodu gaareysay 18 ayaa muddoo afar isbuuc ah waxa ay baranayeen howlaha la xiriira daminta dabka iyo sharciyada loo marayo marka uu meel dab ka kaco.
Guddoomiye ku-xigeenka Maamulka Gobolka Benaadir ee dhanka maamulka iyo Maaliyadda Mudane Ismaaciil Cabdi Guure ayaa ku bogaadiyay shaqaalaha tababarka u soo dhamaatay inay bulshadooda ugu adeegaan waxyaabaha ay soo barteen.
“Soomaaliya idinka ayey idin sugeeysaa, waxaa la idinka sugayaa in aad tababarkaan oo kale u fidisaan guud ahaan wadanka Soomaliya, waxna ugu qabataan shacabkii waxyaabihii la idin baray” ayuu yiri Guddoomiye ku-xigeenka.
Safiirka Soomaaliya ee wadanka Kenya Dajire Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa xusay in shaqaalaha ay waxbadan ka qaban karaan howlaha loo tababaray.
“Dadaalka aad mujiseen waxeey guul weyn u tahay wadankeena waxaadna tahihiin kuwo lagu faano, waxaana la idinkaga baahanyahay in aad si hufan u gudataan howlaha la idin idmaday” ayuu yiri Danjire Cali Ameeriko.
Ugu dambeyntii dhalinyaradii tababarka loo soo xiray ayaa la guddoonsiiyay shahadooyin heerarkooda kala duwanyahay.
Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Beladweyne oo xukunno ku riday rag ka tirsan Al-Shabaab